'कोभिड–१९ महामारीले पत्रकार महिला दुईतर्फी चपेटामा परेका छन्' –नितु पण्डित, अध्यक्ष, सञ्चारिका समूह मिडियाका लागि विपद् रिर्पोटिङ स्रोत :: Disaster Reporting Resources for the Media -- Media Foundation – Nepal
'कोभिड–१९ महामारीले पत्रकार महिला दुईतर्फी चपेटामा परेका छन्' –नितु पण्डित, अध्यक्ष, सञ्चारिका समूह
विपद् रिसोर्स मंगलबार, कात्तिक १८, २०७७
पत्रकार नितु पण्डितसँग रेडियो, टेलिभिजनलगायत मिडियामा लामो समय काम गरेको अनुभव छ । हाल उनी सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष हुन् । कोभिड-१९ को महामारीपछि मिडियाको अवस्था, पत्रकार महिलाका समस्या, प्रविधिको प्रयोगलगायत विषयमा 'मिडियाका लागि विपद् रिपार्टिङ स्रोेत'ले गरेको कुराकानी :
पत्रकार महिला कार्यरत मिडियाले बेतलबी बिदाजस्ता कुरा ल्याइरहेको छ; मिडियाबाट नियमित तलब नपाइरहेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा घरपरिवारबाट पनि जोखिम मोलेर किन काम गर्नुपर्यो, बरु बच्चा हेरेर बस्नु भन्ने कुराहरु आउँछन् । यसरी पत्रकार महिला दुईतर्फी चपेटामा परेका छन् ।
कोभिड-१९महामारीपछि नेपाली पत्रकार महिलाको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
अहिले कोभिड-१९ महामारीबाट सबै क्षेत्र नै प्रभावित भएको अवस्था छ । यसरी बजारमा असर पर्नेबित्तिकै त्यसको प्रभाव मिडियामा पनि पर्ने नै भयो । हामीकहाँ पनि मिडियामा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालिसकेको छ ।
मिडिया प्रभावित भएको स्थितिमा अवश्य पनि पत्रकार महिलाले यसको असर व्यहोर्नुपरेको छ । मेरो विचारमा पत्रकार महिलामा कोभिड-१९ को प्रभाव दुई तरीकाले परेको छ । पहिलो, समग्र पत्रकारिता क्षेत्र प्रभावित बन्दा त्यो पेशामा भएको कारणले एउटा पत्रकारको हैसियतमा पर्ने प्रभाव महिलाहरुमा परेको छ । दोस्रो, घरपरिवारसँगै पत्रकारितालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्नेे दोहोरो जिम्मेवारी महिलाहरुमाथि छ ।
पत्रकार महिला कार्यरत मिडियाले बेतलबी बिदाजस्ता कुरा ल्याइरहेको छ । मिडियाबाट नियमित तलब नपाइरहेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा घरपरिवारबाट पनि जोखिम मोलेर किन काम गर्नुप¥यो, बरु बच्चा हेरेर बस्नु भन्ने कुराहरु आउँछन् । यसरी पत्रकार महिला दुईतर्फी चपेटामा परेका छन् ।
'मिडिया हाउसले बेतलबी बिदामा राख्यो, नियमित तलब पाएनौं' भनी कतिजना पत्रकार महिलाले औपचारिक रुपमा सञ्चारिका समूहमा गुनासो गरेका छन् ?
हामीकहाँ त्यस्तो लिखित गुनासो छैन र, त्यसो त सञ्चारिका समूह उजुरी लिने निकाय पनि होइन । तर, हामीले पत्रकार महिलाहरुसँग भुर्चअल्ली भए पनि प्रादेशिक रुपमा अन्तरक्रिया गरेका छौं । यसका साथै देशभरका करिब सयजना पत्रकार महिलाहरुसँग भर्चुअल्ली सम्मेलन पनि गर्यौं ।
त्यतिखेर उहाँहरुले पत्रकार महिलालाई समस्या छन् भन्ने कुरा राख्नुभएको छ । पछिल्लो समयमा त पत्रकारहरुमा नै कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । त्यसमा पत्रकार महिलालाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । कतिपय संक्रमण भएर पनि निको भइसकेका छन् भने कतिपयलाई संक्रमण भएपछि आइसोलेसनमा रहेका छन् ।
मुलुकमा कोरोना संक्रमणपछि लकडाउन सुरु भएसँगै मिडिया हाउसले तलब कटौतीको कुरा ल्याए । मिडिया हाउसले सेवासुविधा पनि घटाउने प्रस्ताव ल्याएपछि सञ्चारिका समूहले त्यसको विरोधमा स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राखेको थियो । लकडाउनपछि पत्रकार महिलालाई मिडिया हाउसले घरबाटै काम गर्दा हुन्छ भने पनि पछि चलब चाहिँ कटौती गरेर दिएको भनी विभिन्न जिल्लाका साथीहरुले शेयर गर्नुभएको थियो । मिडिया हाउसले तलब कटौती गरेकाले साथीहरु त्यसको मारमा पनि पर्नुभएको छ ।
कोभिड-१९ को महामारीका बेलामा पत्रकार महिलालाई सुरीक्षत तरिकाले रिपार्टिङ गर्नका लागि सञ्चारिका समूहको तर्फबाट कसरी सहयोग गर्नुभएको छ ?
सुरक्षाकै कुरा गर्दा हामीले पत्रकार महिलालाई टोकनकै रुपमा भए पनि मास्क, स्यानिटाइजर आदि वितरण गर्यौं । फिल्डमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारका लागि केही थान मास्कले लामो समय त नपुग्ला ! तर, यसले एक खालको आत्मीयता दर्शाउने काम पक्कै गर्यो ।
हामी साथीहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं, उहाँहरुसँग अन्तक्र्रिया भइरहेको छ । कोभिड-१९ को बेलामा मिडियाको अवस्था जस्तो रहेको छ, सधैंभरि यस्तै रहने पनि होइन । तसर्थ, अहिलेको समयमा पत्रकार महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भर्चुअल भए पनि तालिमलाई अगाडि बढाएका छौं । केही-केही फेलोसिप पनि व्यवस्था गरेका छौं । सञ्चारिका समूहले गर्ने कामले केही मद्दत गर्ने मात्र हो, मिडिया हाउस आफैं बलियो भएर पत्रकारहरुलाई नियमित रुपमा तलब दिनसक्नुपर्छ ।
महामारीका बेला पत्रकार महिलाले गरेका कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
हामी नियमित रुपमा मुलुकभका पत्रकार महिलाहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । अप्ठ्यारोमा परेका साथीहरुलाई सहयोग गर्दै आएका छौं । यस्तो अवस्थामा पत्रकार महिलालाई समस्या प¥यो भन्ने मात्र होइन, फिल्डमा खटिएर राम्रा रिपोर्ट तयार पार्ने पत्रकार महिलाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले हिजो पनि राम्रो रिपोर्ट तयार पार्नुभएको थियो, अहिले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ।
कतिपय पत्रकार महिलाले घरबाटै काम गर्दा पनि राम्रो स्टोरी तयार पार्नुभएको छ । उहाँहरुले टेलिभिजनमा समाचार भनिरहनुभएको छ, टकशो चलाइरहनुभएको छ, रेडियोमा समाचार भनिरहनुभएको छ ।
पत्रपत्रिकामा बाइलाइन आइरहेका छन् । पत्रकार महिलाले क्वारेन्टिनमा बसेर पनि काम गरिरहनुभएको छ । यस्तो महामारीका बेलामा उहाँहरुको भूमिका कस्तो रह्यो भनेर हामीले सञ्चारिकाको अनलाइन महिलाखबर डटकममा अनुभव समेट्ने कार्य गरिरहेका छौं । यसरी हामी त्यस्ता अभ्यासको डकुमेन्टेसन गर्ने काममा पनि लागेका छौं ।
कोभिड-१९ महामारीका बेला मानसिक स्वास्थ्य अति महत्वपूर्ण विषयवस्तु हो । पत्रकार महिलाले यस्तो बेलामा तनावमुक्त रहेर काम गर्नु जरुरी हुन्छ । तपाईंहरुले मनोसामाजिक काउन्सिलिङसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ कि ?
पत्रकार महिलाहरुसँग अन्तरक्रियाका क्रममा हामीले उहाँहरुका समस्याबारे छलफल गरेका छौं । त्यस्ता समस्यामाथि उचित सुझाव र सल्लाह पनि दिएका छौं । अन्तक्र्रियाका क्रममा मनोसामाजिक परामर्शको सेसन पनि राखेका छौं र पछि पनि यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।
तपाईंले अघि कोभिड-१९ पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर पनि हो भन्नुभयो । यो समयमा सुरक्षित रहेर सिर्जनशील बन्न पत्रकार महिलालाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?
हामीले महामारीकै बीचमा प्रदेश २ मा फिचर लेखन तालिम गराएका थियौं । हामीलाई कस्तो कमेन्ट आयो भने पत्रकारिता छाड्नुपर्ने बेलामा के को फिचर लेखन तालिम ? अझै पनि हामी यस्ता तालिम गरिरहेका छौं । विभिन्न प्रदेशमा लेखनको माध्यमबाट महिला हिंसा कसरी कम गर्न सकिन्छ भनी तालिम गराइरहेका छौं ।
अहिले त मिडिया मात्र होइन, सबै क्षेत्र प्रभावित छ । कोरोनापछि मिडिया एउटा नयाँ विन्दुमा जान्छ । त्यो बेलामा मिडिया अहिलेको जस्तै नहुन सक्छ । कोरोनापछि मिडिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा पर्याप्त बहस हुन थालेको छ ।
पक्कै पनि मिडिया कुनै न कुनै स्वरुपमा रहन्छ । त्यही भएर पनि पत्रकारले परिवतर्तित सन्दर्भमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, यस्तो बेलामा हामीले पनि प्रविधिको अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ, कसरी काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । सिक्ने कुरा कहिल्यै सकिँदैन । महामारीमा काम गरेको अनुभवलाई डकुमेन्टेसन गर्न सकिन्छ ।
अब कार्यक्रम गर्ने स्वरुप परिवर्तन हुन सक्छ । हिजोका दिनमा प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर कार्यक्रम गरिन्थ्यो, अनुहार हेराहेर गरेर छलफल हुन्थ्यो । तर, अबका दिनमा काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यस्ता कार्यक्रम गरिन्छन् । यो महामारी कति समय रहन्छ भनी विश्लेषण गर्ने अनि काम गर्ने तौरतरिका बदलेर त्यसमा आफूलाई ढाल्नेजस्ता काम गर्न सकिन्छ ।
आगामी दिनमा सञ्चारिका समूहले पत्रकार महिलाका लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउने योेजना बनाउँदैछ ?
हामी दुइटै किसिमले अहिले काम गरिरहेका छौं । एउटा चाहिँ महिला हिंसा न्युनीकरणका लागि मिडयाको योगदानबारे काम गरिरहेका छौं । अर्को चाहिँ, प्रविधिको प्रयोगबाट गरिने तालिमलाई कसरी अगाडि बढाउने सोचमा छौं । हामीलाई अधिकांश पत्रकार महिलाले आम्दानीको स्रोत कम भएको कुरा बताउनुभएको छ । त्यही भएर हामीले फेलोसिपको कार्यक्रमलाई पनि जोड दिने योजना बनाएका छौं ।
कोरोनापछि पत्रकार महिलाको अवस्था कस्तो छ भनी हामी छलफलबाट आएको कुराको आधारमा बोलिरहेका छौं । कोरोनापछि पत्रकार महिलाको अवस्थाबारे रिसर्च गर्नुपर्छ भन्नेबारे पनि हामी सोचिरहेका छौं । पत्रकार महिलाहरुबीच प्रविधिको प्रयोगलाई कसरी व्यापक बनाउने भन्नेबारे पनि योजना बनाइरहेका छौं । सकेसम्म पत्रकार महिलाको क्षमता विकासका लागि मिडियाका आएका नवीनतम प्रयोगलाई कसरी तालिमका माध्यमबाट व्यवहारमा उतार्ने भन्नेमा हामी केन्द्रित हुन खोजेका छौं ।